Evernote haimanikidze shanduko kune yavo yekuvanzika mutemo uye ivo havazo verenga zvinyorwa zvedu | IPhone nhau
Evernote haimanikidze shanduko kune yavo yekuvanzika mutemo uye ivo havazo verenga zvinyorwa zvedu
Nguva dzese sevhisi painoshandura maererano neshumiro, zvinoenderana nerudzi rweshanduko, vashandisi vanotanga kuratidza kusagadzikana kwavo, kashoma kuti pave neshanduko yekuita zviri nani maererano neshumiro kana mubumbiro rezveMukati. Muenzaniso wakajeka ndezve shanduko kumitemo yebasa reWhatsApp iyo yataisungirwa kupa mvumo yedu kuti data redu rigoverwe nemakambani akasiyana eboka kana tichida kuramba tichishandisa iko kunyorera. Sezvo isu tese tichiziva, iyo kambani yakamanikidzwa kuigadzirisa zvakare isina kusanganisira iyi sarudzo. Asi nhasi tiri kutaura pamusoro pechikumbiro chisina kushandiswa nevanhu vazhinji, asi izvo zvinotibvumidza kuchengeta zvese zvemunhu uye zvekushanda ruzivo: Evernote, ruzivo rwatisingade kugovana nevanhu vechitatu kunze kwekunge tazviita pachedu.
Mazuva mashoma apfuura kambani yakazivisa shanduko mumutemo wayo wekuvanzika iyo yaiti kusvika musi waNdira 23, chero mushandi wekambani anokwanisa kuwana zvinyorwa zvakachengetwa muEvernote. Zvine musoro kuti vashandisi vakaratidza kusagadzikana kwavo uye vakatanga kutsvaga dzimwe nzira mumusika, dzimwe nzira dzakanaka kwazvo nenzira uye dzakachipa kupfuura Evernote.
Tichifunga nezvekugamuchirwa kwakashata uko iyi nhau yakave nayo pakati pemamirioni evashandisi vekambani, Evernote akamanikidzwa kugadzirisa mutemo wega wega zvakare kubvisa chirevo chaibvumidza vashandi vekambani kuti vakwanise kutsvaga kuburikidza nezvinyorwa yevashandisi vayo vese. Muchokwadi, kambani yakaburitsa chirevo ichijekesa izvi nezvimwe zvinhu kuitira kuti vashandisi vagare vakadzikama:
Evernote vashandi usaverenge uye haugone kuverenga zvinyorwa yevashandisi pasina mvumo yavo yakajeka
Evernote tevedza mutemo munzira inochengetedza zvakavanzika zvemutengi data
Yedu "Mitatu Yekudzivirirwa Kwemitemo."
Zvekuvanzika zvave imwe yeiyo zvinotarisirwa nevashandisi vazhinji, pamusoro pezvose, patinotaura nezve internet services, uko kuvanzika kunotanga kuve pamusoro pebasa remahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Evernote haimanikidze shanduko kune yavo yekuvanzika mutemo uye ivo havazo verenga zvinyorwa zvedu
Mhoro Ignacio: Ndedzipi dzimwe nzira dzekuEvernote?
Pano unazvo https://www.actualidadiphone.com/evernote-alternativas/
Ndatenda Ignacio. Ndine zvese uye hapana anogona naEvernote. Evernote haina imwe nzira ...
Iyo Dash naBragi, yakanyanya kupfuura isina mahedhifoni
Maitiro ekudzima software inogadziridza kubva kune yedu kifaa